Multi-Vitamin: July 2011
Alcohol Fruit :D
Posted by 925 at 14:260comments
တောင်ကိုးရီးယားတွင် လူနှစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့သည့် Boeing 747 လေယာဉ်ပျက်ကျမှု
​တောင်ကိုရီး​ယား​ နိုင်ငံတွင် ကုန်တင် ​လေယာဉ်တစ်စင်း​ ပျက်ကျရာ လူ ၂ ဦး​ ​သေဆုံး​သွား​​ကြောင်း​ သိရသည်။
Boeing 747 အမျိုး​အစား​ ​လေယာဉ်သည် Asiana ​လေ​ကြောင်း​လိုင်း​ပိုင် ဖြစ်ပြီး​ ​တောင်ကိုရီး​ယား​ ကမ်း​လွန်ရှိ ဂျီဂျူး​ ကျွန်း​အနီး​တွင် ပျက်ကျခဲ့​ခြင်း​ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ​တောင်ပိုင်း​တွင် ပျက်ကျသွား​​သော ​လေယာဉ်သည် အင်ချွန်း​မှတဆင့်​ တရုတ်နိုင်ငံရှိ ပူ​ဒေါင်သို့​ ဦး​တည်ပျံသန်ခဲ့​ခြင်း​ဖြစ်သည်။ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်​နေ့​က ပျက်ကျခဲ့​​သော ​လေယာဉ်တွင် လိုက်ပါလာ​သော ​လေယာဉ်မှူး​ နှစ်ဦး​လုံး​ ​သေဆုံး​သွား​ခဲ့​သည်။ ဂျီဂျူး​​လေဆိပ်သို့​ မ​ရောက်မီ ​လေယာဉ်သည် ​ရေဒါမြင်ကွင်း​တွင် ​ပျောက်ကွယ်သွား​ခဲ့​ခြင်း​ဟု သိရသည်။
ယွန်ဟပ်သတင်း​ ​အေဂျင်စီက ​လေယာဉ်ပျက်ကို ပြန်လည် ရှာ​ဖွေ ​တွေ့​ရှိထား​ပြီး​ဖြစ်​ကြောင်း​ ​ဖော်ပြခဲ့​သည်။ လက်ရှိတွင် ​လေယာဉ် ပျက်ကျရမှုနှင့်​ ပတ်သက်ပြီး​ စုံစမ်း​မှုများ​ ပြုလုပ်​နေဆဲ ဖြစ်ပြီး​ ရာသီဥတု ဆိုး​ရွား​မှု​ကြောင့်​ ဖြစ်နိုင်​ကြောင်း​ ​လေ့​လာသူများ​က ခန့်​မှန်း​ခဲ့​သည်။
​တောင်ကိုရီး​ယား​တွင် ယခုသီတင်း​ပတ်အတွင်း​ မိုး​များ​ သည်း​ထန်စွာ ရွာသွန်း​လျက်ရှိသည်။ Boeing 747​လေယာဉ်များ​ကို ကုန်တင်​လေယာဉ်အဖြစ်​ရော၊ ခရီး​သည်တင် ​လေယာဉ် အဖြစ်ပါ သုံး​စွဲနိုင်သည်။ Jumbo Jet ဟု နာမည်​ပြောင် ​ပေး​ထား​​သော အဆိုပါ ​လေယာဉ်များ​သည် ဆယ်စုနှစ် ၄ ခုကြာ​အောင် ဆက်လက်သုံး​စွဲ​နေဆဲဖြစ်သလို Boeing ကုမ္ပဏီကလည်း​ အသစ်ထုတ်လုပ်​နေဆဲဟု သိရှိရသည်။
Posted by 925 at 08:280comments
ကမ္ဘာ့​တန်ဖိုး​အကြီး​ဆုံး​ ယာဉ်တိုက်မှုတရား​ခံ မိန်း​က​လေး​
မိုနာကိုတွင် မိန်း​က​လေး​တစ်​ယောက်သည် ကမ္ဘာ့တန်ဖိုး​အကြီး​ဆုံး​ ယာဉ်တိုက်မှုကို အစပြုခဲ့​မိသည့်​ သူမ၏ လုပ်ရပ်အတွက် အကြီး​အကျယ် ထိတ်လန့်​ အံ့​ဩခဲ့​ရသည်။ ​
ပေါင်စတာလင် ၂၅၀၀၀၀ တန် ဘန်တ​လေ Azure ကား​တစ်စင်း​ကို ​မောင်း​လာသည့်​ မိန်း​က​လေး​သည် ကား​ ၄ စင်း​ကို ဆင့်​တိုက်မိ​စေခဲ့​သည့်​ လက်သည်တရား​ခံ ဖြစ်လာသည်။ သူမအတွက် အလွန်ကံဆိုး​သည်မှာ ယာဉ်တိုက်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည့်​ ကား​များ​မှာ ဖာရာရီတစ်စင်း​၊ ​ပေါ်​ရှေး​တစ်စင်း​၊ မာစီဒီး​စ်တစ်စင်း​နှင့်​ ​အော်စတန်မာတင် တစ်စင်း​တို့​ ဖြစ်​နေခြင်း​ဟု သိရသည်။
သူမသည် ​ပေါင်စတာလင် ၇၅၀၀၀ တန် မာစီး​ဒီး​စ် S Class ကား​ကို ဦး​စွာ ၀င်တိုက်ခဲ့​သည်။ ထိုကား​သည် ​ပေါင်စတာလင် ၁၄၀၀၀၀ တန် ဖာရာရီ F430 ကို ထပ်ဆင့်​တိုက်မိခဲ့​သည်။ ထို့​​နောက် ​ပေါင်စတာလင် ၁၄၀၀၀၀ တန် ​အော်စတန်မာတင် Rapide နှင့်​ ​ပေါင်စတာလင် ၈၀၀၀၀ တန် ပို​ရှေး​ 911 တို့​ပါ ကံဆိုး​သွား​ပြီး​ ယာဉ်တိုက်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့​သည်။
ထိုယာဉ်တိုက်မှုအတွင်း ​ ကား​များ​၏ ​လေကာမှန်များ​၊ တံခါး​များ​ ပျက်စီး​ခဲ့​သလို ဆုံး​ရှုံး​မှုတန်ဖိုး​သည် ​ပေါင်စတာလင် ၄၀၀၀၀ ​ကျော်မျှ ရှိနိုင်မည်ဟု ခန့်​မှန်း​ရသည်။ ဥ​ရောပ ​မော်​တော်ကား​များ​ဆိုင်ရာ ​လေ့​လာသည့်​ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှ အယ်ဒီတာဖြစ်သူ ရုဒ်ပတ်က မိမိအ​နေနှင့်​ ဇိမ်ခံကား​ အများ​အပြား​ သီး​သန့်​ပါဝင်ခဲ့​သည့်​ အဆိုပါ ယာဉ်တိုက်မှုမျိုး​ မမြင်ဖူး​ခဲ့​​ကြောင်း​ ဝန်ခံ​ပြောဆိုသွား​သည်။
Posted by 925 at 08:200comments
က​လေး​​များ​ကို Online မှ​တဆင့်​ လိင်ကိစ္စ​​သွေး​ဆောင်သည့်​​အဖွဲ့​ ဖမ်း​ဆီး​​ရမိ
က​လေး​များ​ကို Online မှတဆင့်​ လိင်ကိစ္စအတွက် ​သွေး​ဆောင်​လေ့​ရှိ​သော အဖွဲ့​အစည်း​ တစ်ခုအား​ ဥ​ရောပတိုက် ရဲတပ်ဖွဲ့​က ဖမ်း​ဆီး​ရမိခဲ့​သည်။
လွန်ခဲ့ ​သော ၃ နှစ်ခန့်​ကတည်း​က ဗြိတိန်တွင် စတင်အ​ခြေတည်ခဲ့​သော အဆိုပါ အဖွဲ့​ကို ဖမ်း​ဆီး​ရမိပြီး​နောက် က​လေး​ ၂၃၀ ကို ကယ်တင်လိုက်နိုင်ခြင်း​သည် အလား​တူ ပြစ်မှုမျိုး​များ​တွင် အကြီး​မား​ဆုံး​ဖြစ်​ကြောင်း​ သိရသည်။ ဥ​ရောပ ရဲတပ်ဖွဲ့​က မသင်္ကာသူ ၆၇၀ ဝန်း​ကျင်ထိ ရှိ​နေပြီး​ ၁၈၄ ဦး​ကို ဖမ်း​ဆီး​လိုက်​ကြောင်း​၊​ က​လေး​ ၂၃၀ ကို ကယ်တင်ခဲ့​ကြောင်း​ အတည်ပြုသွား​သည်။
ဥ ​ရော ရဲတပ်ဖွဲ့​၏ ဒါရိုက်တာ ​ရော့​ဝိန်း​ရိုက်က ယခုကိန်း​ဂဏန်း​များ​သည် ​နောက်ပိုင်း​တွင် ပိုမိုမြင့်​တက်လာနိုင်ပြီး​ ယင်း​အမှုနှင့်​ ပတ်သက်၍ စုံစမ်း​မှုများ​ ဆက်လက်ပြုလုပ်သွား​မည်ဟု သတင်း​ထောက်များ​အား​ ​ပြောကြား​ခဲ့​သည်။ ဥ​ရောပ ရဲတပ်ဖွဲ့​သည် နယ်သာလန်တွင် အ​ခြေစိုက်ကာ က​လေး​များ​အား​ Onlineမှတဆင့်​ ​သွေး​ဆောင်ဖြား​ယောင်း​ခဲ့​သည့်​ ဂိုဏ်း​တစ်ခုကို ကာလရှည်ကြာစွာ ​ခြေရာခံ​နေခဲ့​ခြင်း​ဖြစ်သည်။
ယခု ဖမ်း​ဆီး​ရမိမှုများ​အနက် ၁၂၁ ဦး​မှာ ဗြိတိန်မှဖြစ်သည်။ ယင်း​တို့​သည် boylover.net အမည်ရှိ ဖိုရမ်တစ်ခုကို တည်​ထောင်ကာ သက်ကြီး​ပိုင်း​များ​နှင့်​ အရွယ်မ​ရောက်​သေး​သူ က​လေး​များ​ကြား​ လိင်ဆက်ဆံရန် ဆွဲ​ဆောင်မှုများ​ ပြုလုပ်ခဲ့​သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ က​လေး​သူငယ်များ​အား​ ကိုယ်ကျိုး​ရှာ အမြတ်ထုတ်မှု တား​ဆီး​ရေး​နှင့်​ Online ရာဇဝတ်မှု ကာကွယ်​ရေး​ဌာနမှ ပီတာ​ဒေး​ဗီး​က ယင်း​ဖိုရမ်တွင် ပါဝင်ကြသူများ​သည် ယင်း​တို့​နှင့်​ က​လေး​ငယ်များ​ မည်သို့​မည်ပုံ ကာမဆက်ဆံခဲ့​သည်ကို အ​သေး​စိတ် အ​တွေ့​အကြုံဖလှယ် ​ဆွေး​နွေး​လေ့​ရှိ​ကြောင်း​ ​ပြောကြား​ခဲ့​သည်။
ယခုဖြန့် ​ကျက် ဖမ်း​ဆီး​မှုတွင် ဘယ်ဂျီယံ၊​ ဗြိတိန်၊​ ဂရိ၊​ အိုက်စလန်၊​ အီတလီ၊​ နယ်သာလန်၊​ ရို​မေး​နီး​ယား​၊​ စပိန်တို့​ကဲ့​သို့​ ဥ​ရောပ နိုင်ငံများ​အပြင် အ​မေရိကန် ပြည်​ထောင်စု၊​ က​နေဒါ၊​ ဩစ​တြေး​လျနှင့်​ နယူး​ဇီလန်တို့​မှလည်း​ ပါဝင်​ကြောင်း​ သိရသည်။
Posted by 925 at 07:560comments
Labels: Home, knowledge
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး မိုးပျံကား ရောင်းချတော့မည်။
ကမ္ဘာ့ ​ပထမဆုံး​ မိုး​ပျံကား​ကို မကြာမီ ​ရောင်း​ချသွား​တော့​မည်ဖြစ်သည်။ အ​မေရိကန် ကုမ္ပဏီ Terrafugia Transition က မိုး​ပျံကား​ စမ်း​သပ်မှုများ​အား​လုံး​ စိတ်​ကျေနပ်​လောက်ဖွယ် အပြီး​သတ်နိုင်ခဲ့​ပြီး​နောက် ယင်း​ကို မကြာမီ ​ရောင်း​ချသွား​တော့​မည်ဟု ​ကြေညာခဲ့​သည်။
​ဘော်စတွန် အ​ခြေစိုက် ကုမ္ပဏီက ဖန်တီး​ထား​သော ​မော်​တော်ကား​သည် စက္ကန့်​ ၃၀ အတွင်း​ ​မော်​တော်ကား​ အသွင်မှ ​လေယာဉ်ငယ် တစ်စင်း​အဖြစ် အသွင်​ပြောင်း​လဲနိုင်သည်။ ယင်း​သည် ​လေထဲတွင် တစ်နာရီ ၁၈၅ မိုင်နှုန်း​ ​မောင်း​နှင်နိုင်ပြီး​ လမ်း​ပေါ်တွင် ၁ နာရီ ၁၀၅ မိုင်နှုန်း​ထိ မြန်နှုန်း​မြှင့်​တင်နိုင်သည်။ ​မော်​တော်ကား​​အဖြစ် ​မောင်း​နှင်​နေစဉ် ​တောင်ပံများ​ကို ​ခေါက်ထား​နိုင်မည်​ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ် အတွင်း​ စတင်​ရောင်း​ချမည့်​ ​မော်​တော်ကား​များ​၏ ​ဈေး​နှုန်း​ကို ​ပေါင်စတာလင် ၁၂၅ဝဝဝ မှ ၁၆၀၀၀၀ အတွင်း​ သတ်မှတ်သွား​ဖွယ် ရှိ​နေသည်။ ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး​ဖြစ်​သော ရစ်ချတ်ဂရက်က နှစ်စဉ် မိုး​ပျံကား​စင်း​ရေ ၂၀၀ ဝန်း​ကျင်မျှ ​ရောင်း​ချသွား​ရန် ​မျှော်လင့်​ကြောင်း​ ​ပြောကြား​ခဲ့​သည်။
ယင်း​ကား​များ​ သည် တစ်ကြိမ် ဆီဖြည့်​ထား​လျင် မိုင် ၄၀၀ မှ ၄၅၀ ထိ ခရီး​ပေါက်​အောင် သွား​လာနိုင်ပြီး​ ယခုအခါ စင်း​ရေ ၁၀၀ စာ ​အော်ဒါလက်ခံရရှိထား​ကြောင်း​ ၎င်းက ဆက်လက်​ပြောဆိုသွား​သည်။
Posted by 925 at 07:480comments
Labels: Home, interesting
A caretaker showsaPhilippine crocodile as it hatches from an egg atacrocodile farm in Manila.
Posted by 925 at 11:000comments
New York, July 29 (IANS) As of today, Apple boss Steve Jobs is richer than Uncle Sam.
While the world's most powerful government has just $73.76 billion in its reserves, the world's top technology company hasaneat cash pile of $75.87 billion Thursday.
Posted by 925 at 10:350comments
Homemade Face Pack With Honey!
If you are searching for natural skin care remedy and want to makeahomemade face pack with natural ingredients then honey is one of the essential element for natural skin care. Applying honey face pack lightens, rejuvenates and nourishes your skin as it is anti-bacterial.
Following are homemade honey face packs for skin care:
1.Honey and turmeric face pack: mixatablespoon of honey and turmeric respectively and apply this face mask on your face. Leave it for 15 minutes and then wash it off with lukewarm water. You can also add milk to moisturize the skin. This homemade face mask will cleanse the skin and whiten it.
2.Wash the face daily with plain, unpasteurized honey. It will lighten the skin and brighten it.
3.Warm honey inabowl and add yogurt to makeasmooth face pack. Apply this face mask on clean face and neck. Keep it for 15-20 minutes and then rinse off with cold water. Applyamoisturizer if required to retain water in the skin.
Posted by 925 at 10:140comments
The Storied History of the United States Postal Service
Birth of the USPS
The US Postal Service can trace its origins to the Revolutionary War, whenamail system was created as an alternate to the royal mail, which the colonists disliked for its higher rates, which they regarded as an unfair tax. In 1775, the year that the war for independence began, the Continental Congress appointed Benjamin Franklin, above, as the first postmaster general. Franklin had experience at the job; he had been the deputy postmaster general of the colonial mail system.
1847: The First Stamps
In the postal service's early years, it was not the sender but the receiver who paid for the delivery of the mail. This added to the delivery time and increased the likelihood the mail would be refused. With the introduction of the first stamps in 1847, the service was able to standardize delivery costs and provide more efficient service. The first stamps bore the likenesses of first Postmaster General Franklin, on the five-cent, and first President George Washington on the ten cent.
Posted by 925 at 10:050comments
Ultra FLexi GirLs
Posted by 925 at 09:350comments
အဲယားကွန်း အင်္ကျီများ ဂျပန်တွင် အရောင်းသွက်နေ
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အပူဒဏ် ကာကွယ်နိုင်သည့် အဲကွန်းအင်္ကျီများ ရေပန်းစားနေသောကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အပူဒဏ် ကာကွယ်နိုင်သည့် အဲကွန်းအင်္ကျီများ ရေပန်းစားနေသောကြောင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် ၀ယ်လိုအား မြင့်တက်လာမှုကို အလျင်မီအောင် ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရှိရသည်။
ဂျပန်တွင် ငလျင်နှင့် ဆူနာမီ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပြီးနောက် လျှပ်စစ်ဓာတ် ပြတ်လပ်မှုများ ဖြစ်နေချိန် Kuchofuku ကုမ္ပဏီမှ အဲကွန်းအင်္ကျီဟု အမည်ပေးထားသော အင်္ကျီများကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သက်သောင့်သက်သာ မရှိလှသည့် နွေရာသီတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးပြုမှုများကို ကန့်သတ်မှုများကြောင့် မရပ်မနား ပူပြင်းသည့် နွေရာသီ အပူဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် ယင်းအင်္ကျီများကို ၀ယ်ယူမှု မြင့်မားလာခြင်း ဖြစ်သည်။
မတူညီသည့် အရှိန်နှုန်းတွင် လေကိုဆွဲရန် ဂျာကင် အင်္ကျီထဲရှိ လျှပ်စစ်ပန်ကာ နှစ်ခုက ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အင်္ကျီထဲရှိ ပန်ကာများကို lithiumion ဘက်ထရီနှင့် ဆက်သွယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး တစ်ခါအားသွင်းလျှင် ၁၁ နာရီကြာ သုံးစွဲနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
''ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာက အရမ်းပူတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ပါတဲ့ ၀တ်စုံတွေကို ၀တ်သင့်တယ်။ လေသင်တုန်း ဖြတ်တာကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက် အဲကွန်းအင်္ကျီ ၀ယ်ခဲ့တာပါ'' ဟု Kuchofuku ရုံးမှ အဲကွန်းအင်္ကျီ ၀ယ်ပြီး ပြန်လာသည့် အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်ရှိ Ryo Igarashi က ပြောကြားခဲ့သည်။
မော်တော်ကားကုမ္ပဏီ၊ သံမဏိ ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ၊ စားသောက်ကုန် ကုမ္ပဏီနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ အပါအ၀င် ကုမ္ပဏီ ၁၀၀၀ ကျော်ခန့်က Kuchofuku မှ ထုတ်လုပ်သည့် အင်္ကျီများကို မှာယူခဲ့ကြသည်။
Kuchofuku ကုမ္ပဏီသည် အဆိုပါ အင်္ကျီ ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်က စတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အင်္ကျီများကို စက်ရုံများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများမှ ၀ယ်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါတွင် အိမ်ထောင်ရှင်မများနှင့် အခြား ရုံးဝန်ထမ်းများပါ ၀ယ်ယူလာကြသည်။ စံချိန်စံညွှန်းမီသည့် အဆိုပါ အင်္ကျီကို ဒေါ်လာ ၁၄၀ ၀န်းကျင်ဖြင့် ရောင်းချခဲ့ကြောင်း အေအက်ဖ်ပီ သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထုတ်လုပ်သူများသည် ၀ယ်လိုအား မြင့်တက်လာမှုကို အလျင်မီအောင် ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရှိရသည်။ ဂျပန်တွင် ငလျင်နှင့် ဆူနာမီ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပြီးနောက် လျှပ်စစ်ဓာတ် ပြတ်လပ်မှုများ ဖြစ်နေချိန် Kuchofuku ကုမ္ပဏီမှ အဲကွန်းအင်္ကျီဟု အမည်ပေးထားသော အင်္ကျီများကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သက်သောင့်သက်သာ မရှိလှသည့် နွေရာသီတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးပြုမှုများကို ကန့်သတ်မှုများကြောင့် မရပ်မနား ပူပြင်းသည့် နွေရာသီ အပူဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် ယင်းအင်္ကျီများကို ၀ယ်ယူမှု မြင့်မားလာခြင်း ဖြစ်သည်။ မတူညီသည့် အရှိန်နှုန်းတွင် လေကိုဆွဲရန် ဂျာကင် အင်္ကျီထဲရှိ လျှပ်စစ်ပန်ကာ နှစ်ခုက ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အင်္ကျီထဲရှိ ပန်ကာများကို lithiumion ဘက်ထရီနှင့် ဆက်သွယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး တစ်ခါအားသွင်းလျှင် ၁၁ နာရီကြာ သုံးစွဲနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ''ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာက အရမ်းပူတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ပါတဲ့ ၀တ်စုံတွေကို ၀တ်သင့်တယ်။ လေသင်တုန်း ဖြတ်တာကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက် အဲကွန်းအင်္ကျီ ၀ယ်ခဲ့တာပါ'' ဟု Kuchofuku ရုံးမှ အဲကွန်းအင်္ကျီ ၀ယ်ပြီး ပြန်လာသည့် အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်ရှိ Ryo Igarashi က ပြောကြားခဲ့သည်။မော်တော်ကားကုမ္ပဏီ၊ သံမဏိ ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ၊ စားသောက်ကုန် ကုမ္ပဏီနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ အပါအ၀င် ကုမ္ပဏီ ၁၀၀၀ ကျော်ခန့်က Kuchofuku မှ ထုတ်လုပ်သည့် အင်္ကျီများကို မှာယူခဲ့ကြသည်။ Kuchofuku ကုမ္ပဏီသည် အဆိုပါ အင်္ကျီ ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်က စတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အင်္ကျီများကို စက်ရုံများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများမှ ၀ယ်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါတွင် အိမ်ထောင်ရှင်မများနှင့် အခြား ရုံးဝန်ထမ်းများပါ ၀ယ်ယူလာကြသည်။ စံချိန်စံညွှန်းမီသည့် အဆိုပါ အင်္ကျီကို ဒေါ်လာ ၁၄၀ ၀န်းကျင်ဖြင့် ရောင်းချခဲ့ကြောင်း အေအက်ဖ်ပီ သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
Posted by 925 at 01:420comments
တံzသကိးတဂzအဂီ ၊်(Karen song)
စံ၃်စိzနုာ်မဲာ်ထံ (Karen love song) cool performance !
Posted by 925 at 00:460comments
Posted by 925 at 20:100comments
But look closely . . . . See the dark spots on the dam wall?
Now take an even closer look at those dark spots . . .
and if you couldn't believe it before . . . .now look at it closer
yep. . . that isacritter climbing up that wall!!
Posted by 925 at 20:060comments
Wall of Death ...
Defying gravity: Meet the fearless performers who take on the 30ft Wall of Death... with no hands
Hands outstretched and withadefiant grin on his face, this performer entertains hundreds as he races around the 'Wall of Death' in India.
Racing along just feet from spectators and the floor onarickety wooden 'bowl', daredevil performers defy the laws of gravity on motorbikes and in cars in Srinagar, Kashmir.
Death defying: A stuntman takes his hands off his motorbike as he races around the 'Wall of Death' atafair in Srinagar, Kashmir
Playing to the crowd: This performer hangs out of his car as he speeds around the 30ft wooden wall
Using centrifugal force - or counter-centripetal to physicists - the cars and motorbikes are able to circlea30ft vertical wall at high speed.
Traditionally the 'cylinder' in which the vehicles perform is made from wood, allowing for cheap repair but also making the feat that more dangerous due to the rickety nature of the track.
Huge crowds pack the top of the 'wall' to watch as performers climb out of car windows or take their hands off motorbike handlebars.
Celebrities: The performers become stars after wowing crowds with their gravity-defying abilities
Posted by 925 at 19:510comments
Posted by 925 at 19:390comments
Posted by 925 at 19:320comments
Mike Howard (Mike Howard) from Britain walked the beam that can extend between two balloons at an altitude of 6522 m. near the city Yovil, County Somersetshir, UK, September 1, 2004 This feat was captured on videotape for the television show "Guinness records : 50 years, 50 of Records."
Posted by 925 at 08:580comments
RBI raises rates by 50 bps - Housing, Vehicle, Consumer Loan interest will go up
The Reserve Bank of India (RBI) today raised interest rates byahigher-than-expected 50 basis points, indicating the seriousness of the fight against high inflation, despite slowing growth. Asaresult of this housing, vehicle, consumer loan interest rate will go up. There is chance of hike in the Bank Fixed Deposit interest rate also (0.25% to 0.50% rate hike expected), that will come to know withinaweek time.
The central bank said it was increasing the repo rate at which it lends to banks to 8% from the previous 7.5%, and the reverse repo rate, to 7% from 6.5%. This is more than the 25 basis points increase that the market was expecting. However, the cash reserve ratio (CRR) has been left unchanged at 6%. The indices slid immediately after the announcement with the BSE Sensex down by over 300 points (or 1.5%) and the S&P CNX Nifty losing nearly 100 points (or about 1.7%). This is the 11th rate increase by the RBI since March 2010, which is seen as the most aggressive among central banks in fighting inflation.
The whole price index inflation was at 9.44% in June, more than double the RBI's comfort level, and the fear is that high prices could persist through the end of the year.
The RBI also revised upwards its outlook for wholesale inflation for the current year to March 2012 to 7% from the earlier 6%. RBI governor D Subbarao said in his policy review statement, "Considering the overall growth and inflation scenario, there isaneed to persevere with the anti-inflationary stance." But the central bank stuck with its forecast for economic growth in the current year at around 8%, saying that while some interest-rate sensitive sectors have shown signs of moderating, "there is no evidence ofasharp or broad-based slowdown as yet".
"RBI's announcement of 50 basis points increase in repo rate comes asamajor disappointment to the industry. With the growth momentum already under pressure, this move will further hurt the future prospects.Analysts widely expected the RBI to raise rates by about 25 basis points, while some believed there would beapause in the tightening cycle due to signs of slowing growth and global uncertainty. Latest industrial output and manufacturing numbers were the worst in nine months and January-March quarter growth wasaworse-than-expected 7.8%.
"The RBI's action to raise policy rate by 50 bps against market expectation of 25 bps in part reflects its desire to sendastrong anti-inflationary message to market participants and in part reflects front loading of rate hikes
Posted by 925 at 07:590comments
ကြည့်ပြီး စားချင်လွန်းလို့ သွားရည်ကျရင် တာဝန်မယူဘူးနော် :)
ဒီလူရဲ့ ခြေထောက်နားကို ကြည့်လိုက်ပါ။
အလို....! ဖိနပ်ထဲ ၀င်ပုန်းနေပါလားးးးး
Posted by 925 at 07:410comments
IS IT POSSIBLE TO BITE YOUR NOSE..?
Posted by 925 at 01:590comments
ကုန်း၊ သဲပြင်၊ ရေခဲပြင်နှင့် ရေထဲ တို့မှာမောင်းနိုင်တဲ့ ယာဉ်
ထိုယာဉ်ကို တီထွင်သူကတော့ အသက်၂၁ နှစ်သာရှိသေးသူဖြစ်တဲ့ Yuhan Zhang ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။ ထိုယာဉ်ဟာ အမြန်ဆုံးအနေနှင့် တစ်နာရီကို ၆၂ မိုင် မောင်းနှင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဂျာမဏီနိုင်ငံမှ ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုက တာဝန်ယူ ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယာဉ်နာမည်ကိုတော့ Volkswagen Aqua လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ လောင်စာ ကတော့ ဟိုက်ဒရိုဂျင် နှင့်ဖြစ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းသယ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘဲ လူစီးဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by 925 at 18:440comments
ဟန်းဘက်ဝေလငါးများ Humpback whales သည် သားကောင်ငယ်များကိုမဖမ်းခင် အောက်မှ ပတ်ပြီးရေဗူ ဘောင်းများမှုတ်ထုတ်ပြီးမှ ဖမ်းစားလေ့ရှိပါသည်။ အဆိုပါဝေလငါးသည် ၁၄ မီတာထိရှည်ပြီး အုပ်စုလိုက်ဧရိယာတခုတွင်းသိပ်သည်းစွာရှိသောငါးကောင်ငယ်များကိုစက်ဝိုင်းပတ်လည် ရေဗူဘောင်းမှုတ်ထုတ် ပြီးဖမ်းစားလေ့ရှိသည်။ရေဗူဘောင်းကြောင့်ငါးသေးလေးများဖြတ်မကူးတော့ဘဲခြံစည်းရိုးသဖွယ်ဖြစ်လာပြီးမှ၎င်း၏ကြီးမားသောပါးစပ်ဖြင့်ဖမ်းယူစားသောက်သည်။
Posted by 925 at 18:220comments
ဩစတြေးလျ​ဖျော်ဖြေပွဲတွင် ကြက်ဥဖြင့် ပစ်ပေါက်ခံ​ခဲ့ရသည့် ဂျက်စတင်​ဘီဘာ
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုတွင် ဂျက်စတင်ဘီဘာမှ ဥများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခြင်း ခံခဲ့ရကြောင်းသိရသည် ။ ဆစ်ဒနီတွင် ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့က ဖျော်ဖြေစဉ်၎င်းအား နှစ်သက်အားပေးသူ
ပရိသတ်ထောင်နှင့်သောင်းနှင့်ချီက အော်ဟစ်နှုတ်ဆက်နေစဉ် ယခုလို ကြုံရခြင်းဖြစ်သည်။ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် ကနေဒါ ဂီတစူပါစတားလေးသည် Acer Arena ကွင်းကြီးတွင် သီဆိုဖျော်ဖြေနေစဉ် ကြက်ဥ ၁၄ လုံးဖြင့် ပစ်ပေါက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ လူအုပ်ကြားထဲမှ ပစ်လိုက်သော အဆိုပါ ဥများအနက် ၂ လုံးသည် ၎င်းနှင့် ၁ မီတာမျှ အကွာတွင် ကျခဲ့ပြီး အချို့မှာ ဘီဘာကိုကျော်သွားခဲ့သည်။
ဘီဘာသည် ထိုအချိန်တွင် ပရိသတ်နှင့် အတန်ငယ်ကွာအောင် နောက်ဆုတ်နေလိုက်ပြီးနောက် တာဝန်ရှိသူများက စင်ကို အလျင်အမြန် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးလိုက်ပြီးသည့်အခါ ဆက်လက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ယင်းဖြစ်ရပ်ကို Youtube တွင် လွှင့်တင်ခဲ့ပြီးနောက် ဘီဘာကို ချစ်ခင်သော ပရိသတ်များက အင်တာနက် ဝက်ဆိုက်များမှတဆင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချဝေဖန်ခဲ့သည်။ အချို့က ဆစ်ဒနီမှ အဆိုပါ လူရမ်းကားသည် ဘီဘာ ပရိသတ် ၉ သန်းကျော်၏ ရန်သူဖြစ်သွားပြီဟု ရေးသားခဲ့ကြသည်။
အချို့ကလည်း ယင်းဥများသည် ပရိသတ်ထံမှ ထွက်လာခြင်း မဟုတ်ဘဲ စင်အပေါ်ပိုင်းမှ ကျလာခြင်းဖြစ်ရာ ဘီဘာ၏ စတန့်ထွင်မှုတစ်ခုဟု ဝေဖန်နေကြသည်။ ဘီဘာကမူ ယင်းအတွက် မည်သည့်မှတ်ချက်မှ မပေးခဲ့ချေ။ ဘီဘာသည် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးစဉ် ဖျော်ဖြေပွဲ အစီအစဉ်အရ ဆစ်ဒနီ ဖျော်ဖြေပွဲအပြီး မေလ ၂ ရက်နှင့် ၃ ရက်နေ့များတွင် မဲလ်ဘုန်းသို့ သွားရောက်ဖျော်ဖြေမည်ဖြစ်သည်။
Posted by 925 at 10:260comments
အိပ်​ရေး​ဝဝ အိပ်စက်မှု မရှိခြင်း​သည် ကိုယ်အ​လေး​ချိန် တိုး​စေနိုင်​ကြောင်း​ ဆွီဒင်မှ သု​တေသီများ​က ​ဖော်ထုတ်​တွေ့​ရှိခဲ့​သည်။
အက်ဆာလား ​ တက္ကသိုလ်မှ ​ဒေါက်တာ ခရစ်စတီယန် ဘင်နဒစ် ဦး​ဆောင်​သော ပညာရှင်များ​က ​နေ့​စဉ်ပုံမှန် အိပ်​ရေး​ဝဝ မအိပ်ခြင်း​နှင့်​ အိပ်ချိန်မမှန်ခြင်း​တို့​သည် ခန္ဓာကိုယ် ဇီဝဖြစ်စဉ်များ​အတွက် စွမ်း​အင်သုံး​စွဲမှုကို ​လျော့​ကျ​စေသလို ဆာ​လောင်မှုကို ဖြစ်​ပေါ်​စေ​ကြောင်း​ ​တွေ့​ရှိခဲ့​ကြသည်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ​ စွမ်း​အင်သုံး​စွဲမှု ကျဆင်း​သွား​ခြင်း​ကြောင့်​ ကယ်လိုရီ ​လောင်ကျွမ်း​မှု နည်း​ပါး​သွား​ရာ ကိုယ်အ​လေး​ချိန် တိုး​ပွား​လာ​စေခြင်း​ဖြစ်သည်။ ယခု ​တွေ့​ရှိမှုကို အ​မေရိကန် ​ဆေး​ဖက်ဆိုင်ရာ အာဟာရ ​ဆေး​ပညာဂျာနယ်တွင် ​ဖော်ပြခဲ့​သည်။ အ​မေရိကန်တွင် လူဦး​ရေ သန်း​ ၅၀ နှင့်​ ၇၀ ကြား​သည် အိပ်​ရေး​မဝခြင်း​၊​ ပုံမှန်အိပ်ချိန် မသတ်မှတ်ထား​ခြင်း​ စသည်တို့​ ကြုံ​နေ​ကြောင်း​ သိရသည်။
ယခင်က သု​တေသန ရလဒ်များ​က အိပ်​ရေး​မဝခြင်း​သည် ဆာ​လောင်မွတ်သိပ်မှုကို ပိုမိုဖြစ်​ပေါ်​စေ​ကြောင်း​ ​ဖော်ထုတ်​တွေ့​ရှိပြီး​ဖြစ်သည်။ ​လေ့​လာမှုများ​က အိပ်​ရေး​ဝဝ အိပ်စက်ထား​ခြင်း​ မရှိသူများ​သည် ​နောက်တစ်​နေ့​မနက် နိုး​ထချိန်တွင် အသက်ရှူခြင်း​၊​ အစာ​ချေခြင်း​စသည့်​ ဇီဝလုပ်ငန်း​စဉ်များ​အတွက် စွမ်း​အင်သုံး​စွဲမှုမှာ အိပ်​ရေး​ဝသူများ​ထက် ၅ ရာခိုင်နှုန်း​မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း​ထိ ကျဆင်း​နေတတ်​ကြောင်း​ ​ဖော်ပြခဲ့​သည်။
သု ​တေသီများ​က အိပ်​ရေး​မဝခြင်း​သည် ​သွေး​အတွင်း​ သကြား​ဓာတ် ပိုမိုများ​ပြား​အောင် လှုံ့​ဆော်တတ်ပြီး​ ဟိုမုန်း​မညီမျှမှုများ​ကိုပါ ဖြစ်​ပေါ်​စေတတ်​သော​ကြောင့်​ ကိုယ်အ​လေး​ချိန် တိုး​မှုများ​ ဖြစ်လာ​စေတတ်​ကြောင်း​ ​ပြောကြား​သွား​သည်။
Posted by 925 at 10:120comments
ထူး​ထူး​ခြား​ခြား​ သံလိုက်စွမ်း​ရည်များ​ ပိုင်ဆိုင်ထား​သည့်​ ဘရာဇီး​လ်လူငယ်
ဘရာဇီး​လ် လူငယ်​လေး​ ​ပေါ်လို ​ဒေး​ဗစ် အမိုရင်သည် ထူး​ထူး​ခြား​ခြား​ သံလိုက် စွမ်း​ရည်များ​ ပိုင်ဆိုင်ထား​သူ​လေး​ ဖြစ်သည်။
အသက် ၁၁ နှစ်သာ ရှိ​သေး​​သော အမိုရင်တွင် သံလိုက်နှင့်​ အလား​တူ စွမ်း​ရည်မျိုး​ ထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီး​ ပတ်ဝန်း​ကျင်မှ သတ္တုပစ္စည်း​များ​ကို ဆွဲယူနိုင်သည်။ ၎င်း​၏ ဖခင်က အမိုရင်သည် ခက်ရင်း​ခွများ​၊ ဓား​များ​၊ ကတ်​ကြေး​များ​၊ ကင်မရာများ​နှင့်​ အခြား​​သော သတ္တုပစ္စည်း​များ​ကို ခန္ဓာကိုယ်တွင် ကပ်ငြိ​နေ​အောင် ​စေစား​နိုင်​ကြောင်း​ လက်​တွေ့​ ပြသခဲ့​သည်။
အမိုရင်၏ ဖခင်ဖြစ်​သော ဂျူနီယာက ၎င်း​၏ သား​ကဲ့​သို့​ပင် ခရို​အေး​ရှား​မှ လူငယ်​လေး​တစ်ဦး​သည်လည်း​ ထူး​ခြား​​သော အဆိုပါ စွမ်း​ရည်မျိုး​ ရှိ​နေသည်ကို ကြား​သိဖူး​​ကြောင်း​ ​ပြောကြား​ခဲ့​သည်။ အသက် ၆ နှစ်အရွယ် ကိုပရီနီကာဖွား​ ခရိုအက် ချာတိတ်​လေး​ အိုင်ဗန် စတိုလီကိုဗစ်သည်လည်း​ ခန္ဓာကိုယ်​ပေါ်တွင် ၄ စတုံ အ​လေး​ချိန်ရှိသည့်​ သတ္တုပစ္စည်း​များ​ကို တွယ်ယှက်ထား​နိုင်သည်။
မိမိ၏ သား​ကလည်း​ ခက်ရင်း​များ​ကို ထိုကဲ့​သို့​ ကပ်ထား​​အောင် လုပ်ပြနိုင်သည်ကို ​တွေ့​ရှိလာပြီး​​နောက် အလွန် အံ့​ဩမိ​ကြောင်း​ ဂျူနီယာက ​ပြောကြား​ခဲ့​သည်။ ယခုအခါ ​မော့​ဆိုရိုတွင် ​နေထိုင်​သော ချာတိတ်​လေး​ ဂျူနီယာသည် သံလိုက်လူသား​​လေး​ဟုပင် နာမည် ​ကျော်ကြား​​နေပြီဖြစ်သည်။
၎င်း ​၏ အ​ခြေအ​နေကို ​လေ့​လာ​နေသည့်​ ​ဒေါက်တာ ဒစ်ဆက် ရိုဆာဒို ဆိုဘရီနိုက မိမိ၏ ဆရာဝန်လုပ်သက် နှစ် ၃၀ ​ကျော်အတွင်း​ ထိုကဲ့​သို့​ စွမ်း​ရည်မျိုး​ ရှိ​နေသူကို တစ်ခါမှ မ​တွေ့​ဖူး​​ကြောင်း​ ဝန်ခံခဲ့​သည်။
အမိုရင်၏ ခန္ဓာကိုယ် တည်​ဆောက်ပုံသည် သာမန်လူသား​များ​ ကဲ့​သို့​ပင် ဖြစ်​သော်လည်း​ သံလိုက်စွမ်း​အင်များ​ ထူး​ထူး​ခြား​ခြား​ ထွက်​ပေါ်​နေခြင်း​အတွက် အ​ဖြေရှာမရ​ကြောင်း​ ​ဒေါက်တာ ဒစ်ဆက်က ​ပြောကြား​သွား​သည်။
Posted by 925 at 10:070comments
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့ အမြန်ဆုံး စူပါကွန်ပြူတာ
ဂျပန်နိုင်ငံက K ဟု အမည်​ပေး​ထား​သည့်​ စူပါကွန်ပျူတာ တစ်လုံး​ကို ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး​ ကွန်ပျူတာအဖြစ် ထုတ်ပြန်​ကြေညာလိုက်သည်။
K ၏ စွမ်း​ဆောင်မှု အရည်အ​သွေး​သည် သာမန်အိမ်သုံး​ ကွန်ပြူတာ အလုံး​တစ်သန်း​စာနှင့်​ ညီမျှသည်။ Fujitsu ကုမ္ပဏီသည် K အတွက် အစဉ်တစိုက် မြှင့်​တင်မှုများ​ ပြုလုပ်ခဲ့​ပြီး​နောက် ယခုအခါ ကွန်ပြူတာ၏ လုပ်​ဆောင်ချက်သည် တစ်စက္ကန့်​လျင် ၈ ကွာဒြာလီယမ် ပမာဏထိ တွက်ချက်မှုများ​ကို ​ဆောင်ရွက်နိုင်​နေပြီဖြစ်သည်။ ၁ ကွာဒြာလီယမ်သည် အကြိမ် ၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ နှင့်​ ညီမျှမည်ဖြစ်သည်။
K သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ Tianhe- 1A က ၆ လလုံး​လုံး​ သိမ်း​ပိုက်ထား​သည့်​ ကမ္ဘာ့​အမြန်ဆုံး​ ကွန်ပြူတာဆို​သော ဂုဏ်ပုဒ်ကို လက်လွှဲယူနိုင်ခဲ့​သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ စူပါကွန်ပြူတာမှာ လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး​အဖြစ် ရပ်တည်​နေနိုင်သည့်​တိုင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြန်ဆုံး​ စူပါကွန်ပြူတာ အလုံး​ရေ အများ​ဆုံး​ ပိုင်ဆိုင်​နေမှုတွင် အ​မေရိကန်က ဦး​ဆောင်​နေဆဲဖြစ်သည်။ ထိပ်ဆုံး​ ၁၀ ​နေရာတွင်ပင် အ​ မေရိကန်၏ စူပါကွန်ပြူတာ အ​ရေအတွက်သည် ၄ လုံး​ဖြင့်​ အများ​ဆုံး​ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ K သည် Circuit လမ်း​ကြောင်း​ ၆၇၂ ခုဖြင့်​ သွယ်တန်း​ချိတ်ဆက်ကာ CPU အလုံး​ပေါင်း​ ၇၀၀၀၀ ​ကျော်ဖြင့်​ ​မောင်း​နှင်လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။
၎င်းအတွက် အသုံး​ပြုရ​သော ဓာတ်အား​ ပမာဏဖြင့်​ လူ​နေအိမ်​ခြေ ၁၀၀၀၀ ​ကျော် လုံ​လောက်စွာ အသုံး​ပြုနိုင်သည်။ K ကို ပုံမှန်ထိန်း​သိမ်း​ ​မောင်း​နှင်​ပေး​နေခြင်း​ကြောင့်​ Fujitsu အ​ နေနှင့်​ နှစ်စဉ် ပေါင်​ငွေ ၆ သန်း​စီ ကုန်ကျ​နေ​ကြောင်း​လည်း​ သိရှိရသည်။
Posted by 925 at 09:560comments
Labels: Home, it, knowledge
အားသာချက် - User Interface ဖွဲ့စည်းထားပုံက ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသလို Scan Speed လည်း အလွန်လျှင်မြန်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
အားနည်းချက် - တစ်ချို့သော Detection တွေကိုတော့ သာမန်မျှသာ လုပ်ဆောင်နိုင် တာကို တွေ့ရပါတယ်။
သုံးသပ်ချက် - Avast Free Antivirus5ဟာ malware တွေကို တားဆီးပေးနိုင်ပြီး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လွယ်တဲ့ Interface ပါရှိတဲ့အပြင် ဖိုင်တွေကို Scan ပြုလုပ်နိုင်နှုန်း အလွန်လျှင်မြန်တာကြောင့် ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် antivirus တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အားသာချက် - ဖိုင်အရွယ်အစား သေးငယ်ပြီး Install ပြုလုပ်ရတာလည်း အလွန်လျင်မြန်ပါတယ်။ Malware တွေကို ကာကွယ်နိုင်မှုစနစ် အလွန်ကောင်းမွန် ပါတယ်။
အားနည်းချက် - Malware detection အလွန်ကောင်းမွန်ပေမယ့် removal ပြုလုပ် ရာမှာတော့ အားနည်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Disinfect ပြုလုပ်ရာမှာ ဖိုင်အချို့ကို ပျက်စီးသွားစေနိုင်ပြီး Rootkit တွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။
သုံးသပ်ချက် - Avira AntiVir Personal Free Antivirus 10 ဟာ malware တွေကို ဖယ်ရှားရာမှာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ antivirus ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အားသာချက် - Malware detection စနစ်အထူးကောင်းမွန်ပြီး အသုံးပြု ရတာလည်း လွယ်ကူတဲ့ antivirus ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အားနည်းချက် - Scan Speed က နှေးကွေးပါတယ်။
သုံးသပ်ချက် - Panda Cloud Antivirus 1.0 ဟာ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ antivirus တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Scan Speed နှေးကွေးပေမယ့် malware detection ကတော့ အလွန် ကောင်းမွန်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
အားသာချက် - User Interface အထူး ကောင်းမွန်ပါတယ်။
အားနည်းချက် - Malware တွေကို Detection ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းက သာမန်မျှ သာရှိကာ Scan ပြုလုပ်နှုန်းလည်း အလွန်နှေးကွေးတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သုံးသပ်ချက် - Microsoft Security Essentials 1.0 ဟာ အသုံးပြုရ အလွန် လွယ်ကူပေမယ့် malware တွေကို detect လုပ်နိုင်စွမ်း အလွန်အားနည်းပါတယ်။
အားသာချက် - Malware အသစ်တွေကို တားမြစ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး firewall လည်း ထည့်သွင်း ပေးထားပါတယ်။
အားနည်းချက် - Malware detection စနစ်က တစ်သမတ်တည်း မရှိပါဘူး။
သုံးသပ်ချက် - Comodo Internet Security Premium 5.0 ဟာ malware အသစ် တွေကို တားမြစ်ပေးနိုင်သလို firewall လည်း ပါရှိပါတယ်။
Posted by 925 at 09:170comments
ဒိုင်နိုဆော ရုပ်ကြွင်း လေလံတင်မည်
ပေါင်စတာလင် (၄.၈)သန်းမျှ ငွေကြေးရှိပါက ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် အရက်စက် အကြမ်းကြုတ်ဆုံး ဒိုင်နိုဆော မျိုးစိတ်အဖြစ် မှတ်တမ်း တင်ထားသည့် တိုင်ရန်နိုဆောရပ် တကောင်၏ ရုပ်ကြွင်းကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၆၆)သန်းက အသက်ရှင်ခဲ့သည့် ကြီးမားသော သတ္တ၀ါကြီး၏ အရိုးစုမှာ (၁၅)ပေ မြင့်ပြီး ပေ(၄၀) အထိ ရှည်လျားသည်။ ထို အကောင်ကြီးအား နောက်လတွင် လေလံ တင်မည်ဖြစ်ပြီး ပေါင်ငွေ (၄.၈)သန်း အထိ ရရှိမည်ဟု လေလံ လုပ်ငန်းရှင်များက မျှော်လင့် ထားကြသည်။ ဆမ်ဆွန်ဟု ချစ်စနိုး အမည်ပေးထားသည့် တိုင်ရန် နိုဆောရပ် အမကြီး၏ ရုပ်ကြွင်းမှာ အရိုးပိုင်း (၁၇၀)ကျော် ပါရှိပြီး (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပြည့်စုံလျှက် ရှိသည်။ အမေရိကန် သဘာဝ သမိုင်းပြတိုက်တွင် ပြသထားသည့် အရိုးစုကြီးအား အောက်တိုဘာလ (၃)ရက် နေ့တွင် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့၊ ဗင်နစ်ဆီယန် ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပမည့် လေလံပွဲ အတွင်း ရောင်းချသွားမည် ဖြစ်သည်။ တိုင်ရန်နို ဆောရပ် များသည် ၎င်းတို့ ကမ္ဘာမြေကို ကြီးစိုးစဉ် ကာလက မြောက်အမေရိကတွင် အဓိက ကျက်စားခဲ့ပြီး ဆမ်ဆွန်အား တောင်ပိုင်း ဒါကိုတာတွင် (၁၉၈၇) မှ (၁၉၉၂)ခုနှစ် အတွင်း အချိန်ယူ တူးဖော်နိုင်ခဲ့သည်။ ဆမ်ဆွန်အား လေလံ တင်ခြင်းကြောင့် တကမ္ဘာလုံး အတွက် အာရုံစိုက်စရာ ဖြစ်လာကြောင်း ပြတိုက်မှ ထိန်းသိမ်းရေး ဒုတိယဒါရိုက်တာ သောမတ် လင်ဂရန် ကဆိုသည်။ မိမိတို့ အနေနှင့် ဆွမ်ဆန်အတွက် ပေါင်စတာလင် (၃.၆)သန်း မှ (၄.၈)သန်းကြား ရရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်း လင်ဂရန် က ဆိုသည်။ သို့သော်လည်း ဒိုင်နိုဆောကြီးအား လေလံ တင်ရောင်းချရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် အကြောင်းရင်း ကိုမူ ၎င်းက ပြောပြ မသွားခဲ့ချေ။ တိုင်ရန် နိုဆောရပ်များသည် Jurassic Park ရုပ်ရှင်ကြောင့် လူသိများလာပြီး ၎င်း၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ပုတ်သင် တို့၏ဘုရင် တိုင်ရန်ဟူ၍ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Labels: Home, interesting, knowledge
ကြယ်တာရာ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုကြောင့် ကမ္ဘာကြီးသည် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ခန့် နေ့ချည်းသက်သက် ဖြစ်ပေါ်ရန်ရှိ
ကမ္ဘာ့နက္ခတ်တာရာ ပညာရှင်များသည် သမိုင်းတင်ပြီးခေတ် နောက်ပိုင်း ယနေ့ ၂၁ ရာစုအတွင်း အာကာသဆိုင်ရာ အထူးခြား ဆန်းကြယ်ဆုံး သတင်းတစ်ပုဒ် အဖြစ် ကမ္ဘာကြီးအတွက် ဒုတိယမြောက် နေလုံးတစ်ခု ပေါ်လာပြီး နေ့ညကွဲပြားခြင်း ခေတ္တရပ်ဆိုင်းသွားနိုင်သည် ဆိုသော သတင်းကို သြစတြေးလျ သတင်းဌာနမှ တစ်ဆင့် ကမ္ဘာသို့ ဇန်န၀ါရီလ ၂၂ ရက်နေ့က တင်ပြခဲ့သည်။ ၄င်းတို့၏ စောင့်ကြည့်လေ့လာချက်များအရ ကမ္ဘာ့ကောင်းကင်မှ မြင်ရသော ကြယ်ကြီးများထဲတွင် အဌမအကြီးဆုံး အနီရောင် ကြယ်ကြီး ဖြစ်သည့် Betelgeuse သည် ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရန် စွမ်းအင် မကြာမီ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွင်း ကုန်ဆုံးတော့မည် ဖြစ်ပြီး ယင်းကဲ့သို့ စွမ်းအင်များ ကုန်ဆုံးသွားချိန်တွင် ဆူပါနိုဗာ (Supernova) ခေါ် ကြယ်တာရာ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပွားမည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆူပါနိုဗာ ပေါက်ကွဲသော အခါ နဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုစာ အကျယ်အ၀န်းအထိ တောက်ပသော အလင်းတန်းများ ဖြာထွက်လာမည် ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမြေသည် ၄င်းဖြစ်စဉ်မှ အလင်းရောင်များ ရရှိနေမည် ဖြစ်သောကြောင့် နေ့နှင့်ည လည်ပတ်မှု ဖြစ်စဉ် ယာယီ ပြောင်းလဲကာ နေ့အဖြစ် ဖြင့်သာ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ခန့် တည်ရှိနေမည်ဟု ပညာရှင်များ ခန့်မှန်းထားကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် အဆိုပါ အလင်းတန်းများ ထွက်ပေါ်နေသော ကြယ်စုကြီးသည် ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်မှ ကြည့်လျှင် ဒုတိယ နေတစ်လုံးကဲ့သို့ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းတွင် မြင်တွေ့ရဖွယ် ရှိသည်ဟု ကြားသိရသည်။
ဤကဲ့သို့ ကမ္ဘာကြီးသည် နေနှစ်လုံးမှ အပြိုင် အလင်းများ ရရှိနေခြင်းသည် နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ တွင်မှ တစ်ကြိမ် ကြုံတွေ့နိုင်သည့် အခွင့်အရေး ဖြစ်ပြီး အစက နှစ်ပေါင်းများစွာ လိုသေးသည်ဟု တွက်ဆခဲ့ကြသော်လည်း ယခုဆိုလျှင် ဤသို့ဖြစ်ရန် အချိန် လွန်စွာ နီးကပ်နေပြီဟု နက္ခတ်ပညာရှင်များက ခန့်မှန်းကြသည်။
“အခုဆိုရင် ဒီကြယ်အိုကြီးဟာ သူ့ရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာ မီးစာကုန် ဆီခန်း ဖြစ်နေ ပါပြီ။ သူ့ကို ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ လောင်စာ စွမ်းအင်တွေ ကုန်သွားရင် အလွန်လျင်မြန်စွာ ပြိုပျက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ ကွင်းစ်လန်းတောင်ပိုင်း တက္ကသိုလ်မှ ပညာရှင် ဘရက် ကာတာမှ အဆိုပါ သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ရေးသားထားခဲ့သည်။ ၄င်းက ခန့်မှန်း တွက်ချက်ရာတွင် ထိုဖြစ်ရပ်သည် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ်များအတွင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ နေ့ညမကွဲပြားဘဲ နေ့အသွင်ဖြင့် တည်ရှိနေခြင်းသည် အနည်းဆုံး ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်ခန့် ကြာမြင့်နိုင်ကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။ ၄င်း Betelgeuse ကြယ်နီကြီးသည် ကမ္ဘာမြေမှ အလင်းနှစ် ၆၄၀ အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိသော Orion ကြယ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး ကမ္ဘာမှ သာမန်မျက်စိဖြင့်ပင် တွေ့မြင်နိုင်သလို လာမည့် ကြယ်တာရာ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်ကိုလည်း နေကာမျက်မှန်များ အသုံးပြု၍ ကြည့်ရှုရန် မလိုကြောင်း၊ မကြာမီ အချိန်ကာလ အတွင်း၌ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသား တို့သည် ကမ္ဘာ့နက္ခတ်တာရာ နှင့် အာကာသဆိုင်ရာ သမိုင်းတွင် နှစ်သန်းပေါင်းများစွာမှသာ တစ်ကြိမ် ကြုံတွေ့ရနိုင်သော ဆူပါနိုဗာ တစ်ခုမှ အလင်းကြောင့် ညမရှိတော့ဘဲ ရက်သတ္တပတ် အတန်ကြာ နေ့အဖြစ်သာ တည်ရှိနေခြင်းကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ရဖွယ် ရှိကြောင်း အဆိုပါ သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
ဘရက်ကာတာက အထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုသော်လည်း အမေရိကန် နိုင်ငံမှ ပညာရှင်များက အဆိုပါ ကိစ္စသည် တွေးထင်မှန်းဆချက်သာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ကြယ်ကြီးသည် စွမ်းအင်ကုန်လုနီးပါး ဖြစ်သည်ဟု တွေ့ရှိရသော်လည်း ကြယ်တာရာ ပေါက်ကွဲမှု ဆူပါနိုဗာ တစ်ခု ဖြစ်မည့် အချိန်ကို လက်ရှိ ကမ္ဘာ့နောက်ဆုံးပေါ် တယ်လီစကုပ်နှင့် ကွန်ပျူတာများကပါ အတိအကျ စစ်ဆေး တွက်ချက် ဖော်ပြနိုင်ခြင်း မရှိသေးသလို ၄င်းစကြ၀ဠာဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်များသည် တိကျစွာ ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်ရန် မည်သည့် ပညာရှင်မျိုးကမျှ မစွမ်းနိုင်သေးကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မကြာခင် ကမ္ဘာကြီးတွင် နေနှစ်စင်း ပေါ်လာတော့မည် ဆိုသော သတင်းများအတွက် ထိုသို့ ဖြစ်ရန် အချိန်နီးကပ်နေပြီး အနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်နိုင်သော အချိန်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ဖြစ်သည် ဆိုသော အချက်မျှ လွဲ၍ မည်သို့မျှ မပြောနိုင်ပါကြောင်း ဇန်န၀ါရီလ ၂၅ ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၀ နာရီခန့်က www.thenewamerican.com သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် တုန့်ပြန်ရေးသား အသိပေးခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အဆိုပါ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားရာ နေရာသည် ကမ္ဘာမှ အလွန်အမင်း ကွာဝေးသော နေရာတွင် တည်ရှိသောကြောင့် အလင်းရောင်များ ကမ္ဘာပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာမည်မှ လွဲ၍ ဆိုးရွားသော ထိခိုက်မှု မရှိနိုင်ကြောင်း၊ ခရစ်ယာန် သမ္မာကျမ်းစာပါ ကမ္ဘာလောက၏ တရားစီရင်ရာ နောက်ဆုံးနေ့ရက် (Doomsday) ကဲ့သို့ ကမ္ဘာကြီး နိဂုံးချုပ် ပျက်စီးသွားမည့် နေ့ရက် မဖြစ်နိုင်သေးပါကြောင်း၊ အခြားသော ဘာသာအယူဝါဒ အချို့ကဲ့သို့လည်း နဂိုရှိရင်းစွဲထက် နေများ ထွက်ပေါ်လာကာ ကမ္ဘာကြီး ပူပြင်းလောင်ကျွမ်း ပျက်သုဉ်းသွားမည် ဆိုသော အတွေးများဖြင့်လည်း စိုးရိမ်ပူပန်ကြခြင်း မဖြစ်စေလိုကြောင်း ပညာရှင်များက အလေးအနက်ထား ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
အကယ်၍သာ မကြာမီ နှစ်လရက်များအတွင်း ထိုသို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါက သမိုင်းတင်ပြီး ခေတ်နောက်ပိုင်း၌ အထူးခြား အဆန်းပြားဆုံး ဖြစ်သည့် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ခန့် နေ့ချည်းသက်သက်သာ ရှိခြင်းကို ကျွန်တော်တို့ခေတ် လူသားများ တွေ့ကြုံ မှတ်တမ်းတင်ခွင့် ရရှိဖွယ် ရှိသည်ဟု တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
Fl Studio Assign Edition 10 Full Version Download
နောက်ထပ် အတီးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး plugin ကောင်းကောင်းလေးတွေ Share ဖို့.ရှိပါသေးတယ်
Download WIth Mediafire (219 MB)
ဂီတ ဝါသနာပါတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ထားပါတယ်
Posted by 925 at 08:46 1 comments
ရတနာသိုက် ရှာတွေ့တယ် ဆိုပါလား
မေသဇင်ဆိုသူ သတင်းထောက်ရေးသားသော သတင်းကို ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန် မီဒီယာ အုပ်စုက အင်တာနက် စာမျက်နာတွင် ထိုသို့ ထုတ်ဖေါ်ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ သတင်းတွင် ရှေးရခိုင် ဘုရင်များ မြှုပ်နှံထားသော ရတနာသိုက် နေရာကို High Tech Geology (NASA) ထုတ်ထားသော ဂြိုဟ်တု Lan-dsat-7 ETM+(2000) Di-gital Image Data ရှိ Spectrum လိုင်းများကို အထူးပြုလေ့လာခြင်း ဖြင့် ၎င်းင်းရတနာသိုက်များမြှုပ်နှံထားသည့် နေရာရှစ်နေရာတွေ့ရှိရသည်ဟု Global9Education မှသိရကြောင်း ဖေါ်ပြသည်။
ထို့ပြင် ယင်း နေရာများကို ကွင်းဆင်းတိုင်းတာပြီးမှ မြှုပ်နှံ သည့်နေရာကိုအတည် ပြုထားခြင်းဖြစ် ကြောင်း ဖေါ်ပြသည်။
ယင်းရတနာသိုက်နေရာအား လွန်ခဲ့သည့်ငါးလလောက်က တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရဟု ပြောသည်။
ဘဲငါးရာတောင်သည် ရခိုင် ပြည်နယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့၏ မြောက်ဘက် ၁၆ မိုင်အကွာ ကုလားတန်မြစ် အနောက် ဘက်ကမ်း ယိုးတရုတ်စံပြကျေးရွာကြီးအနီး စစ်တွေ-ရန်ကုန်ကားလမ်းမကြီး၏ အနောက်ဘက် တစ်မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ တောင်ထိပ်၏ အမြင့်မှာ ပေ ၁၃၆၀ခန့် မြင့်မားပြီး အရှည် ၅၆၃ ပေ နှင့် အကျယ် ၄၆ပေရှိကာ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသ၏ ဗဟိုချက်မတွင် တည် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် အဆိုပါ ရတနာသိုက် မပျက်စီးမဆုံးရှုံးရအောင် ဘဲငါးရာရှင်မနှင့် နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တို့အား ကူညီစောင့် ရှောက်ပေးတော်မူပါဟု တိုင်တည်ကာ အဓိ ဋ္ဌာန်ပြုထားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါရတနာသိုက်အား မက် မောသော ပုဂံမင်းစောမွန်နစ်မှာစုံစမ်းရှာ ဖွေရင်း စမ်းမတွိမြို့ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြန်သည်။ ဘုရင်သက်မင်းငအောင်လာသည်လည်း မြှုပ် နှံထားခဲ့သည့်ရတနာတို့ကို မယူနိုင်တော့ဘဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် ခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၌ပင် နတ်ရွာစံခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
(စမ်းမတွိ-ကုလားတန်မြစ် လက်တက်တစ်ခုဖြစ်သော စမ်းမတွိချောင်း၊ ထိုနေရာတွင် နန်းမြို့ တည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်) ပုဂံမင်း ဘုရင် စောမွန်နစ်မှာလည်း အဆိုပါ ရွှေ၊ ငွေ၊ ရတနာများကို ရှာမတွေ့ခဲ့ဘဲ နောက်ပြန်လှည့်သွားခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။
ဘဲငါးရာတောင်တွင် ရတနာ သိုက်ရှိသည်ဟု လူအများသိရှိလာသည့် အခါသိုက်တူးသမားများ မကြာခဏ လာ ရောက်ခဲ့ကြပြီး ရတနာသိုက်ရယူရန် ကြိုး စားခဲ့ကြသော်လည်း အကြောင်းတစ်ခုခု ကြောင့် အစီအစဉ်ပျက်သွားတတ်သည်ဟု ဘဲငါးရာတောင်မှ ရှေးလူကြီးများက ပြော ကြသည်။
ထို့ပြင် ဘဲငါးရာတောင်ရိပ်ထိုး သော ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာဒေသများတွင် ဘဲမွေးကာ စားသောက်ခြင်း၊ ဘဲဥစားခြင်း မရှိရဆိုသည့် အယူအဆမှာ ၎င်းဒေသရှိ ရှေးဘိုးဘေးစဉ်ဆက်ကပင် ယုံကြည်ကျင့် သုံးလာခဲ့ကြသည်မှာ ဤတောင်၏ထူးခြား ချက်ပင်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းတောင် တွင် နှစ်စဉ် တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ည ၌ အတ္တလောက၊ ပရလောက သားတို့လာ ရောက်ဆေးပေါင်းလေ့ ရှိသည်ဟု ဒေသခံ များက ယုံကြည်နေကြဆဲပင်ဖြစ်သည်။
''ပြီးခဲ့တဲ့ငါးလလောက်က ဖလား ၀ါးနယူးစ်ဂျာနယ်မှာ အခန်းဆက်ပါခဲ့တဲ့ ဦးထွန်းကျော်ရီ(စစ်တွေ)ရဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီး နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ ဒီရှေးဟောင်း ရတနာတွေ မြှုပ်နှံထားတဲ့နေရာကို ရှာခဲ့ တယ်။ အဲဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ ရှာတွေ့ခဲ့ တာပါ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း သတင်းထုတ်ပြန် ဖို့ တော်တော် လေး စဉ်းစားနေခဲ့ရတယ်။ မတော်လောဘသမားတွေနဲ့ မသမာသူတွေ သိသွားမှာ စိုးတယ်။ သမိုင်းဝင်လဲ ဖြစ်တာ ကြောင့် အစိုးရခွင့်ပြုချက်နဲ့မှ တူးခွင့်ရမှာ မို့လို့ပေါ့'' ဟု ဦးစိုးသိန်းက ဆက်လက်ပြော ပြခဲ့သည်။
အထက်ဖော်ပြပါသတင်းဆောင်း ပါးအား ဦးထွန်းကျော်ရီ(စစ်တွေ)၏ ဖလား ၀ါးနယူးစ် ဂျာနယ်အတွဲ(၆)၊ အမှတ်-၄၉နှင့် ၅၀တို့တွင် နှစ်ပတ်ဆက်တိုက်ဆောင်းပါး အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည့် ကုလားတန်မြစ်အနောက် ဘက်ကမ်းမှ သမိုင်းဝင်ဘဲငါးရာတောင်နှင့် ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်များေ ဆာင်းပါးအား ကိုးကား၍ ပြန်လည်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
Posted by 925 at 08:390comments
ဆယ်ကျော်သက် ကွန်ပျုတာ စောရ အား ဂရိရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီး
DK၊ ၊နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် အမေရိကန်အစိုးရဋ္ဌာနအချို့ကို ထိုးဖောက်ခဲ့သည့် အသက် ၁၈ နှစ်ခန့်သာ
ရှိသေးသည့် ဟက်ကာတဦးအား ဂရိနိုင်ငံ၊ အေသင်မြို့တွင် ဂရိရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဂရိရဲ
တပ်ဖွဲ့ အထက်တန်းအရာရှိတဦးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါအမည်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိသည့် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်ဟက်ကာလေးသည် အေသင်မြို့တောင်
ပိုင်းဆင်ခြေဖုံးရှိ အလုပ်သမားလူတန်းစားများနေထိုင်ရာ အားဂျီးယို့စ်ဒီမီးထရီးယို့စ်ခရိုင်တွင် ၄င်း၏မိခင်ဖြစ်
သူနှင့်အတူ နေထိုင်သည်။ ၄င်းသည် ကမ္ဘာအနှံ့အပြားသို့ ထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်မှုများအား ထိုအိမ်မှနေ၍
လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဂရိဆိုင်ဘာမှုခင်းတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
၄င်းသည် နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ (Interpol) အားထိုးဖောက်လေ့ရှိပြီး၊ အမေရိကန်အမေရိကန်အစိုးရဋ္ဌာန
အချို့လည်း ၄င်း၏ထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်မှုကို ခံခဲ့ရသည်။ ဂရိနိုင်ငံတွင်ထွက်ပေါ်ခဲ့သည့်သတင်းများအရ အဆိုပါအမည်မသိဆယ်ကျော်သက်လူငယ်ဟက်ကာသည် အမေရိကန်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဋ္ဌာန (NSA,
National Security Agency)၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ (FBI, Federal
Bureau of Investigation)၊ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရုံးစိုက်သည့်၊ ပင်န်တဂွန်စစ်ဋ္ဌာနချုပ်
(The Pentagon) တို့သို့တရားမ၀င် ၀င်ရောက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ရရှိခဲ့သည်ဟု
‘ nsplitter ‘ ဆိုသောအမည်ဝှက်သုံးသည့် ဤဟက်ကာလေးသည် အန္တရာယ်ရှိကြောင်းသတိမပြုမိပဲ
Internet Toolbar များကို ဒေါင်းလုတ် (Download) ဆွဲချမိခဲ့သည့် အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏
အကြွေးဝယ်ကဒ်များ (Credit Card) နှင့် အွန်လိုင်းဘဏ်ငွေစာရင်းများ (E-Banking) မှ အချက်အလက်
များကိုခိုးယူခဲ့ပြီး ဘဏ်ကဒ်အတုများပြုလုပ်ကာ တရားမ၀င်ငွေထုတ်ယူမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Posted by 925 at 08:180comments
Posted by 925 at 04:480comments
This is amazing. He died of pancreatic cancer in 2008, but wroteabook The last lecture, one of the bestsellers in 2007. Whatalegacy to leave behind. Inaletter to his wife Jai and his children, Dylan, Logan , and Chloe, he wrote this beautiful "guide toabetter life" for his wife and children to follow.May you be blessed by his insight.
Posted by 925 at 18:510comments
The spicy peppers can kick-start your metabolism because ofaspecial component. You can add red pepper in its ground form to soups, marinades and sauces or cook with it in its raw form.
Posted by 925 at 04:330comments
Labels: health, Home, knowledge
Posted by 925 at 00:510comments
Posted by 925 at 00:350comments
Posted by 925 at 05:360comments
Wanna smoking ???
Posted by 925 at 10:410comments
Holland Vs Portugal *Fight*
Posted by 925 at 10:300comments
Amazing woman football skill
Posted by 925 at 10:110comments
Posted by 925 at 10:030comments
Ferrari, Lamborghini, McLaren & Bentley RACE
Labels: Home, interesting, sport
Posted by လွန်းထားထား(ဆေးတက္ကသိုလ်) at 22:26
သူမတို့သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ပြန်ဆုံချိန်မှာပြောဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ သူမတို့ရဲ့ ယောက်ျားများအကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ မကွယ်ဝှက်ကြေး၊ ဟန်မဆောင်ကြေး၊ အကြွားမသန်ကြေးပြောဖြစ်ကြတယ်ဆိုပါတော့....။သူမတို့သုံးယောက်ဟာအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတာကိုး....။
ဟိုးငယ်စဉ် သူငယ်ချင်းတွေဘဝမှာတုန်းကတော့ သူမတို့ဟာ ချစ်သူရည်းစားချင်း ပြိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးကြပါရဲ့။ ကိုယ့်ချစ်သူကတော့ ကိုယ့်ကို ဘယ်လောက်ချစ်၊ ဘယ်လောက် ဂရုစိုက် အလိုလိုက်ကြောင်း လုပ်ကြံလီဆယ်ဇာချဲ့ပြီး ကြွားမဆုံးရှိခဲ့တာပေါ့။
အခုတော့အရွယ်ကလေးတွေလည်းရခဲ့ပြီမို့ရင့်ကျက်ခဲ့ကြပြီဖြစ်သလိုယောက်ျားတို့ရဲ့အချစ် ဆိုတာကိုလည်း တော်တော် သိမြင်ခဲ့ပြီလေ။
အဝင်းက ပထမဆုံး ရယ်တစ်ဝက် မဲ့တစ်ဝက် မျက်နှာထားဖြင့် ပြောခဲ့ပုံက ....
Posted by 925 at 08:430comments
The boundaries of the triangle cover the Straits of Florida, the Bahamas and the entire Caribbean island area and the Atlantic east to the Azores. The more familiar triangular boundary in most written works has as its points somewhere on the Atlantic coast of Miami; San Juan, Puerto Rico; and the mid-Atlantic island of Bermuda, with most of the accidents concentrated along the southern boundary around the Bahamas and the Florida Straits.
The earliest allegation of unusual disappearances in the Bermuda area appeared inaSeptember 16, 1950 Associated Press article by Edward Van Winkle Jones. Two years later, Fate magazine published "Sea Mystery at Our Back Door",ashort article by George X. Sand covering the loss of several planes and ships, including the loss of Flight 19,agroup of five U.S. Navy TBM Avenger bombers onatraining mission. Sand's article was the first to lay out the now-familiar triangular area where the losses took place. Flight 19 alone would be covered in the April 1962 issue of American Legion Magazine. It was claimed that the flight leader had been heard saying "We are entering white water, nothing seems right. We don't know where we are, the water is green, no white." It was also claimed that officials at the Navy board of inquiry stated that the planes "flew off to Mars." Sand's article was the first to suggestasupernatural element to the Flight 19 incident. In the February 1964 issue of Argosy, Vincent Gaddis's article "The Deadly Bermuda Triangle" argued that Flight 19 and other disappearances were part ofapattern of strange events in the region. The next year, Gaddis expanded this article intoabook, Invisible Horizons.
If you want to learn more .....
Posted by 925 at 06:130comments
Blog Hack မခံရအောင်......
Blog hack မခံရအောင် ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်မလဲပေါ့....
ဒါကတော့ Blogger.com က dashboard မှာရှိတဲ့ Settings ကိုနှိပ်ပါ။
အထက်ပါ ပုံအတိုင်း Export ကိုနှိပ်ပါပြီးနောက်
DOWNLOAD BLOG ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင်
Save file ဆိုပြီးတော့ Save ခိုင်းပါလိမ့်မယ် ဒီအခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Computer ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်၊
USB ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်...လုံခြုံတဲ့နေရာမှာ သိမ်းထားရုံဘဲ..
ကယ်ဒီ blog hack ခံရပြီး လုံးဝဖွင့်မရတော့ဘူးဆိုရင် Blogger Account တခုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့
import blog မှာ အရင်က DOWNLOAD လုပ်ထားတဲ့ Blog ကိုပြန်တင်..
နဂိုအတိုင်း Comments ပါအပါအ၀င်ပြန်လည်ရရှိပါမယ်။။။။
Posted by 925 at 10:390comments
တောင်ကိုးရီးယားတွင် လူနှစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့သည့် Boein...
ကမ္ဘာ့​တန်ဖိုး​အကြီး​ဆုံး​ ယာဉ်တိုက်မှုတရား​ခံ မိန်း...
က​လေး​​များ​ကို Online မှ​တဆင့်​ လိင်ကိစ္စ​​သွေး​ဆေ...
The Storied History of the United States Postal Se...
စံ၃်စိzနုာ်မဲာ်ထံ (Karen love song) cool performa...
RBI raises rates by 50 bps - Housing, Vehicle, Con...
ကုန်း၊ သဲပြင်၊ ရေခဲပြင်နှင့် ရေထဲ တို့မှာမောင်းနို...
ဩစတြေးလျ​ဖျော်ဖြေပွဲတွင် ကြက်ဥဖြင့် ပစ်ပေါက်ခံ​ခဲ့...
ထူး​ထူး​ခြား​ခြား​ သံလိုက်စွမ်း​ရည်များ​ ပိုင်ဆိုင...
၂၀၁၁ အတွက် အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မည့် ထိပ်တန်း Antivi...
ဆယ်ကျော်သက် ကွန်ပျုတာ စောရ အား ဂရိရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်း...
WTTC 2008 table tennis best points
TORNADO/ EARTHQUAKE/ TSUNAMI/ HURRICANE/
Plants eat Objects ...
Spectacular Explosive Eruptions at Anak Krakatau (...
Sad Dog Wants To Drink More
A man with half his head
Dirty Little Plants
ဟာသ မှတ်စု (၃)
A NEW KIND OF RAPE (LADIES BE WARNED!!!)
Interesting Vegetables !
Coooooool Tattooooooo !!
Magic Twins !!!
GOD....save me !!!
So Cooooooooool .... !!
FIRST 3D TECHNOLOGY IN MOBILES
WHAT A GIRL AND A GUY WANTS
1 Husband2wives
Home Made .... !!!
WoW .... Cool .... !
Amazing Snake Eats Egg
Nature's Fury - Gushing Geysers